France Oo Soo Baxday Iyo Argentina Hartay – Radio Muqdisho
France Oo Soo Baxday Iyo Argentina Hartay
Wareega 16-ka ee koobka aduunka ayaa bilowday galabta kulankii ugu horeyay waxaa foodo isku daray magalada Kasan dalalka Argentina iyo France oo ah lab aka mid ah dalalka ugu waa weyn koobka aduunka.
Ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa waxaa qaybtii hore lagu kala nastay 1-1, France oo rigooro heshay ayaa waxaa gool u badalay Griezman oo weerarka ugu ciyaara France, Argentina oo heshay goolkii barbraha ahaa ayaa waxaa u saxiixay Angel Di Maria oo ka ciyaara horyaalka France ee Ligue 1-ka qaybtii hore ayaa sidaasi lagu kala nastay qaybti danbe ayaa la isku soo laabtay waxaa daqiiqadihii ugu horeyay hogaanka qabatay Argentina kadib markii gool ay ka heleen Marcedo oo lambarka labaad ugu ciyaarayay Argentina, daqiiqado markii ay ka soo wareegtay ayaa waxaa goolkii barabaha france u sahlay Pavard oo lambarka labaad ugu ciyaarayay France waxaana uu u Jawaabay Mercado oo isku lambar ay ka ciyaarayeen.
Daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta ayaa waxaa hogaanka qabatay markale france waxaa gool ay ka heleen Kylian Mpabe oo goolkisii labaad u saxiixay france waxaana uu noqday xidigaasi ciyarayahankii ugu da’a yaraa ee france gool u dhaliya koobka aduunka tariikhda ayadoo sidoo kale uu noqday ciyarayahankii afaraad ee gool ka dhaliya koobka aduunka kuwa ugu da’da yare ee koobka aduunka goolal ka dhaliya.
67-daqiiqo markii ay halkaasi mareyso ayaa waxaa markale goosha soo taabtay Mpambe oo ahaa galabta xidiga garoonka waxaana uu saxiixay golkii afaraad ee ciyaarta ayadoo sadexda ka mid ah afarta goo lee france uu ku lug lahaa Mpambe, Waxaaana uu noqday da’a yarkii ugu horeyay ee koobka aduunka kulan ka tirsan koobka aduunka laba gool ka dhaliya tan iyo 1958 kolkaasi oo Pelle uu laba dhaliyay.
Daqiiqadihii dhimashada ayaa waxaa goolkii sadexaad u saxiixay Argentina Aguero oo ciyaarta badal ku soo galay waxaana uu ka dhigay 4-3 todobo gool ayeey iska dhaliyeen labadaan dal oo ah kuwa ugu awooda badan koobka aduunka ee haatan ka socda dalka ruushka sidaasi waxaa lagu qaarijiyay Argentina sidaasi waxaa wareega 8-da ugu soo gudubtay France oo koobka ku guuleystay 1998 kolkaasi oo tartanka ay marti geliyeen.
France ayaa ah dal aanan laga adkaan dhamaan kulamada uu ciyaaray koobka aduunka ayadoo sidoo kale france uu yahay mid aanan guul daro kala kulmin dalalka ka soo jeeda waqooyiga America kulamada koobka aduunka uu la ciyaaray waxaana ugu danbeysay guuldaro uu kala kulmo france dalalkaasi sanadkii 1978 kolkaasi oo france guuldaro 2-1 ah uu kala kulmay Argentina oo haatan uu qaarijiyay.
Wasiirka Howlaha guud ee XFS oo faah faahiyay heshiisyo ay la soo saxiixdeen madaxda dalka Maroco+sawiro
Madaxweyne Farmaajo oo faray Baarlamaanka Soomaaliya in ay kaalintooda sharci ka qaataan hirgelinta Hay’adda Qaran ee Naafada